Ku Daaweynta Isha Jeermis-dilaha - Hesperian Health Guides
Ku Daaweynta Isha Jeermis-dilaha
HealthWiki > Cusub Meelaan Dhakhtari Joogin > Cutubka 27: Ilmaha Dhashay iyo Naas-Nuujinta > Ku Daaweynta Isha Jeermis-dilaha
Ilmaha Dhashay iyo Naas-Nuujinta: Daawooyinka
Jeermis-dilayaasha waxay la Dagaalamaan Caabuqa
Loogu talogalay Ummulow (Cabeeb, caabuq-Qamiireed)
Si loo joojiyo dhiig baxa ilmaha dhashay
Boomaatada jeermis-dilaha isha iyo goojada waxaa loo isticmaalaa in caabuqa daran lagu badbaadiyo indhaha ilmaha dhashay iyoarag-la’aanta oo ku dhici karta haddii hooyadu ay qabtay caabuqa la isugu gudbiyo galmada ee ku jiray farjigeeda markii ay dhaleeysay. Waxaa kaloo loo isticmaalaa in lagu daweeyo caabuqyada jeermiska isha. Laakiin haddii isha caabuqeedu daran yahay, afka ka sii ama cirbad jeermis-dile ah ugu bedel.
Boomaatooyinka 1% tetracycline AMA 0.5% ilaa 1% erythromycin ayaa loo isticmaala si looga badbaado caabuqa dhalashada kaddib iyo caabuqa bakteeriyada isha ku dhaca ee meel dhexdhexaadka ah. Kuwan wada sii hal mar, 2 saacadood gudahooda dhalashada kaddib.
Haddii boomaatada isha ee jeermis-dilaha ah aan la heli karin, waxaad ishiiba u isticmaali kartaa 1 goojo oo 2.5% milan curiye kiimiko-povidone ah ama hal goojo oo milan curiye kiimiko milix ah. Curiyaha kiimikada milixda ah waxay noqotay in diirada in badan la saaro inta ay ka uumi-bexeyso - sidaa darteed ha isticmaalin curiye kiimiko milix hore ah. Waxay gubeysaa indhaha ilmaha. Haddii ay shaki kaaga jirto, waxaa kaaga wanaagsan isticmaalka curiye kiimiko milix oo dhan.
Si aad u isticmaasho boomaatada, si tartiib ah u soo jiid isha daboolkeeda oo majuuji liilka yar ee boomaatada adigoo gudaha uga soo shubaayo oo banaanka isha daboolkeeda ku keenaya. Goojada indhaha, soo jiid daboolka hoose oo ku tuuji laba dhibcood. Ha u oggolaan in dhululubada ama dhalada isha taabato.
Waxaa laga keenay "http://so.hesperian.org/w/index.php?title=New_Where_There_Is_No_Doctor:Ku_Daaweynta_Isha_Jeermis-dilaha:_Ilmaha_Dhashay_iyo_Naas-Nuujinta&oldid=26"